ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lee Sang-Hwa အားလက်ခံတွေ့ဆုံ | Ministry of Hotels and Tourism, Myanmar
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lee Sang-Hwa အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
by MO HT | Jun 29, 2018 | News |0comments
နေပြည်တော်၊ ဇွန်လ (၂၈) ရက်
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ် ကြီး H.E. Mr. Lee Sang-Hwa အားယနေ့ နံနက် (၁၀း၀၀)နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ရုံးအမှတ် (၃၃)၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတို့အကြား နှစ်နိုင်ငံ ၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းမှတဆင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ပိုမိုတိုးတက်လာစေရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပါကြောင်း၊ ကိုရီးယားခရီးသွားဧည့်သည်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ရာတွင် ယခုထက်ပိုမို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက်သာမက ကိုရီးယားခရီးသွားဧည့်သည်များ ပိုမိုလာရောက်နိုင်ရန်အတွက် ၀င်/ထွက်မှုလွယ်ကူရေးအစီအစဉ်များ ချမှတ်အကောင် အထည်ဖော်ရန်စီစဉ်နေပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် မိမိ တို့ဝန်ကြီးဌာန၌ ယခုအခါတွင် တရုတ်စကားပြောသင်တန်း၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း နှင့် ဂျပန် စကားပြော သင်တန်းများကို ၀န်ကြီးဌာနရှိ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းငယ်များအတွက် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေး လျက်ရှိရာ ကိုရီးယားဘာသာစကားပြောသင်တန်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး အတွက်ကိုလည်း ကူညီပေးစေလိုပါ ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးက ပြန်လည်ပြောကြားရာတွင် ၄င်းတို့အနေဖြင့်လည်း နှစ် နိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ကြိုဆို ပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၌ မကြာသေးမီက ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် Lotte Hotel အနီး အင်းယားကန်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလှအပများ ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် အစီအစဉ်များကို ၄င်းတို့အနေဖြင့် အဆိုပြုတင်ပြရန် စီစဉ်လျက် ရှိနေပါကြောင်း နှင့် Lotte Hotel လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရပ် များကို တင်ပြပါသည်။ ထို့နောက် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ပြေးဆွဲလျက်ရှိသည့် Korea National Airline ပြေးဆွဲနေသော အခြေ အနေများ နှင့် ကိုရီးယားခရီးသွားဧည့်သည်များ ရန်ကုန်လေဆိပ် မှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်နေမှုအခြေအနေများ စသည်ဖြင့် မြန်မာ-ကိုရီးယား(၂)နိုင်ငံ ခရီးသွား လုပ်ငန်းပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။